Diovy Room Mechanical Seal Doors
Heavy Adidy Automatic Sliding vata fampangatsiahana Doors
Fogging fandroana / zavona fandroana
ZF2 firaka fitaratra
Narovan'i Neutron Doors
MRI miaro Doors
Clean Room Mechanical Seal Doors Mechanical Seal varavarana ho an'ny Avo Containment Facilities Golden ny rivotra Door mahatohitra fanerena milina manolotra tombo-kase varavarana containment avo lenta ho an'ny laboratoara sy ny efi-trano madio. Mamorona ny varavarana azo antoka airtight sakana amin'ny matanjaka, fa pliable tombo-kase, izay Compressed hanohitra ny doorframe. Mechanical Seal varavarana ny milina tombo-kase dia tsy miantehitra amin'ny Compressed rivotra mba hanangana fanakatonana voaisy tombo-kase. Noho izany, ny varavarana mahomby manome tombo-kase, dia very fahefana. The ...
Clean Room Mechanical Seal Doors
Mechanical Seal varavarana ho an'ny Avo Containment Facilities
Door Golden mahatohitra ny rivotra tsindry milina manolotra tombo-kase varavarana containment avo lenta ho an'ny laboratoara sy ny efi-trano madio. Mamorona ny varavarana azo antoka airtight sakana amin'ny matanjaka, fa pliable tombo-kase, izay Compressed hanohitra ny doorframe.
Ny milina tombo-kase dia tsy miantehitra amin'ny Compressed rivotra mba hanangana fanakatonana voaisy tombo-kase. Noho izany, ny varavarana mahomby manome tombo-kase, dia very fahefana.
Ny vokatra dia manasongadina ny mpampiasa-namana famolavolana mampiasa vy sandriny mba hanery ny vavahady ho amin'ny tombo-kase. Ny rafitra tafatoetra tao amin'ny doorframe, mba tsy manampy fanampiny lanja ny varavarana mihitsy. Ny milina dia mitaky ny tombo-kase varavarana natsangana tokonam-baravarana mba hanangana ny nitsaharan'ny tombo-kase. Aiza maoderina tokonam-baravarana no ilaina, ny ranomasina pneumatic varavarana fa tsy dia azo ampiasaina.
Ny tombo-kase milina varavarana mahomby no vahaolana ho an'ny BSL4 BSL3 na laboratoara, ary ny fampiharana hafa izay FEPETRA avo lenta ny containment. Tokonam-baravarana ny atsangana dia midika fa ny varavarana no nasiana tombo-kase tery tsara indrindra mifanaraka amin'ny faritra ambany fifamoivoizana, izay naterak'ireo kodiarantsika sarety tsy ilaina.
Famolavolana mivantana amin'ny tsy-azo antoka tombo-kase
Easy hanokatra iray-polo.
Fanakatonana rafitra nitaingina ho eo amin'ny varavaran'ny toetsika ny hery fanampiny.
Azo manify amin'ny fahafahana miditra isan-karazany sy ny fanaraha-maso ny rafitra.
Machined fametrahana mazava tsara fototra mafy orina-trano.
Previous: Inflated Air henjam-Gasket Doors
Next: VHP Pass Box
Air madio Pass Box
Sivanina Clean Air hanadio Room Pass Box
Clean Room hamaky Box
Cleanroom Mechanical Seal varavarana
Cleanroom zavona fandroana
Hospital Clean Room Pass Box
Pneumatic Seal Doors